Musharaxiinta Puntland oo qaadacay guddiga khilaafaadka ee madaxweynuhu magcaabay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 3, 2013 5:39 b 0
Garoowe, December 3, 2013 – Afar musharax oo ka tirsan u tartamayaasha xilka madaxweynenimo ee Puntland kuna sugan Garoowe ayaa si wayn uga soo horjeestay digreeto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Faroole, taas oo lagu magcaabay xubnaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee Puntland.
Musharaxiinta afarta ah ee Garoowe jooga ayaa si wadajir ah u qabtay shir jaraa?id, waxayna kala ahaayeen Cali Xaaji warsame, Maxamed Cabdinuur, Cabdulaahi muuse Aw-cali, iyo Cali Xaaji Cabdulle.
?Waxaan halkaan ka cadaynaynaa sida horay aan u sheegnay in lagu heshiiyey in guddigaas si wadajir ah loo magcaabo, lagalana tashado musharaxiinta madaxweynuhu ka mid yahay, isimada. Wxgaradka iyo bulshada rayidka ah.? Ayuu yiri Musharax Cali Xaaji warsame.
Musharax Cali Xaaji Warsame oo hadalkiisa siiwatay ayaa yiri ??Waxaan halkan ka cadaynaynaa inanan guddiga aqoonsanayn, madaxweynuhuna uusan sharci u halayn asaas ahaan, annaguna waxaan ku heshiinay inaan soo magcowno guddi cusub oo aan kala tashanayno musharaxiinta uu madaxweynuhu ku jiro.?
Musharaxiinta ayaa si cad u sheegay in ay talaabo ka dhan ah magcaabista madaxweynaha ay maalmaha fooda nagu soo haya qaadi doonaan, iyagoo keenaya guddi balaaran oo ah guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee Puntland, sida ay hadalka u dhigeen.
?Ma aqoonsanin guddiga madaxweynuhu magcaabay mana oggolaanayno.? Sidaas waxaa shirka jaraa?id ka sheegay Musharax Maxamed Cabdinuur oo ka mid ah tartamayaasha Garoowe jooga.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole ayaa goor sii horaysay oo maanta ah, waxaa uu magcaabay guddi ka kooban 7 xubnood iyo Xoghayn, madaxweynaha ayaa ku tilmaamay mid dastuuri ah magcaabistiisa guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee Puntland.
Dhegeyso:- shirka jaraa?id ee ay qabteen musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Puntland
Baahin: Salaasa, 3 Dec, 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe